Uhlobo lwe-KB Series Breaker H-Type
Uhlelo lokuvikela ukudubula olungenalutho ukuvikela izingxenye lapho i-breaker ixoshwa ingenalutho
Ikhava yedivayisi yokuvikela ngokuzenzakalela nokuvikelwa
Idivayisi ye-swivel valve nekhava yokuvikela
Ukulawulwa komsindo ngokusetshenziswa kohlaka oluthuliswe ngokwengeziwe
Ukuvinjelwa kokuqhekeka kwephini lokumisa ngesakhiwo esingabonakali sethuluzi lepini
Ubuchwepheshe obukhulu buhlanganiswe nokuklanywa okuhle
Uhlobo lwe-KB Series Breaker V
Ukulawula okulula nokubeka kalula kwenza kube lula kakhulu ngomsebenzi we-excavator.
Ngaphandle kwesisindo sohlangothi, kunciphisa izinga lokwehlukaniswa kwesisi.
Ubude obuphelele nobude obusindayo ngokuphelele, obulungele ukwakhiwa kokubhujiswa.
Uhlobo lwe-KB Series Breaker S
Izinga lomsindo eliphansi, elifanele indawo ethulile nemisebenzi yedolobha.
Ubakaki ovalwe ngokugcwele uvikela umzimba omkhulu.
Uhlobo lwe-Tor Series Breaker H-hlobo
Uhlobo lwe-Tor Series Breaker V-uhlobo
Uhlobo lwe-Tor Series Breaker S-hlobo
1, I-Mechanical excavator wood grab: Iqhutshwa yi-excavator bucket cylinder, ngaphandle kwamabhulokhi we-hydraulic namapayipi;
2, 360 ° ojikelezayo we-hydraulic excavator wood grab: udinga ukwengeza amasethi amabili wamabhuloki e-hydraulic valve namapayipi kusilawuli sokulawula;
3, Ukubamba kwezinkuni okungaguquguquki kwe-hydraulic excavator wood: Kuyadingeka ukwengeza isethi yamabhulokhi e-hydraulic valve namapayipi kusilawuli sokulawula.
Ifanele izindawo ezahlukahlukene zokusebenza. Ngeke isetshenziselwe kuphela imisebenzi yokudiliza, njengokubhidlizwa kwezitshalo zamakhemikhali, izigayo zensimbi nezindawo zokusebenzela zensimbi, kepha futhi nokutholwa kwempahla kakhonkolo. Kuyinto enhle imishini yokudiliza. Izici zayo zilula futhi zisebenza kahle kakhulu. Lapho okusetshenziswayo kusetshenziswa kabusha futhi kubola, kusikwa izingcezu ezinkulu zezinto ezilahliwe bese zihlanganiswa, okuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi futhi kugweme ukukhathazeka ngabasebenzi. Ifanele iziteshi ezinkulu nezisemaphakathi zokusebenzisa kabusha imfucumfucu nemisebenzi yokudilizwa komasipala.
Kuyinto yedivaysi engaphambili yesikebhe efakwe kumbimbi, ngosizo lwamandla ahlinzekwa umakhi, ngokuhlanganiswa komhlathi osusekayo kanye nomhlathi ongaguquguquki wesigaxa sokuchoboza ukufeza umphumela wokuphahlazeka kokhonkolo . Kusetshenziswa kabanzi embonini yokudiliza kanye nemfucumfucu yezimboni. isikhathi.
Izindlebe zokuchoboza zakhiwa ngumzimba wokuphrinta, isilinda esisebenza ngamanzi, umhlathi ohambayo kanye nomhlathi ohleliwe. Umzimba wepulisi wakhiwe ngamazinyo emihlathi, izindwani, namazinyo ajwayelekile. Kufakwe kumbimbi futhi kungokunamathiselwe kukambamba.
Amabhulethi okuchoboza manje asetshenziswa kabanzi embonini yokudiliza . Ngesikhathi senqubo yokudiliza, kufakwa kumbimbi yokusetshenziswa, ukuze kudingeke kuphela opharetha oyedwa we-excavator.
Izikere zokulahla zifakwe kuzimbiwa futhi zilungele izindawo ezahlukahlukene zokusebenza. Zingasetshenziselwa imisebenzi yokudiliza, njengokubhidlizwa kwezitshalo zamakhemikhali, izitshalo zensimbi kanye namaworkshops ezakhiwo zensimbi, futhi zingasetshenziselwa ukwenza kabusha izinto zikakhonkolo. Kuyinto ephelele Ukudilizwa kwemishini. Izici zayo ukuphepha, lula nokusebenza kahle. Izisetshenziswa ziphinda zisetshenziswe futhi zibole ngenkathi izingcezu ezinkulu zezinto ezisikiwe zisikwa futhi zahlanganiswa, okuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi futhi kugweme ukukhathazeka okuphathelene nezokuphepha. Ifanele iziteshi ezinkulu nezisemaphakathi zokusebenzisa kabusha imfucumfucu nemisebenzi yokudilizwa komasipala.
I-Vibration compactor uhlobo lwensiza yokusebenza yokusiza yemishini yokwakha, esetshenziselwa umgwaqo, umasipala, ezokuxhumana ngocingo, igesi, ukuphakelwa kwamanzi, ujantshi neminye iminyango ukuhlanganisa isisekelo sobunjiniyela nomsele obuyela emuva. Ifanele ikakhulukazi ukuhlanganiswa kwezinto ezinamathela aphansi nokungqubuzana phakathi kwezinhlayiya, njengesihlabathi somfula, i-gravel ne-asphalt. Ubukhulu besendlalelo sokudlidliza se-ramming sikhulu, futhi nezinga lokuxinana lingahlangabezana nezidingo zezisekelo ezisezingeni eliphakeme njenge-Expressways.
Ukuthula Uhlobo Breaker, Crusher Ukuze Excavator, Pulverizer Ukuze Excavator, Isilawuli Valve Ukuze Breaker, Hb Series Breaker, Shear Ukuze Excavator,